Madaxweynayaasha Nauru iyo Palau waxay saxiixeen ASA, oo ah fursad dalxiis oo cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Nauru » Madaxweynayaasha Nauru iyo Palau waxay saxiixeen ASA, oo ah fursad dalxiis oo cusub
Airlines • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Nauru • News • Wararka Palau • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Nauru iyo Palau waa laba dal oo madax -bannaan oo ku yaal Koonfurta Badweynta Baasifigga.
Wada shaqaynta dadka Nauru waxay u sahlanaan doontaa marin u helka Palau oo keliya, laakiin sidoo kale Taiwan iyo gobollada kale ee Badweynta Baasifigga fog.
Madaxweynayaasha Nauru iyo Palau waxay kala saxiixdeen heshiiska adeegyada hawada (ASA) kaas oo bilaabi doona socdaalka labada dal ee Micronesia iyo wixii ka dambeeya, 2 September.
The Madaxweynaha Nauru Lionel Aingimea ayaa sheegay in saxiixa heshiiska uu astaan ​​u yahay xiriirka qotada dheer iyo saaxiibtinimada ka dhexeysa Nauru iyo Palau, “laakiin sidoo kale loogu talagalay gobolka weyn ee Micronesia.”
“Kaliya maahan heshiiska adeegyada cirka wuxuu xoojinayaa isku xirnaanta labadeenna jasiiradood laakiin wuxuu fursad siinayaa in la kordhiyo dheefaha dhaqaale ee labada dal ee danta ah.
"Nauru waxaa ka go'an inay sare u qaaddo kaalinteeda qaybta gaadiidka ee gobol-goboleed ahaan, gobol ahaan, iyo caalamkaba," ayuu yiri Madaxweyne Aingimea.
Madaxweynaha Palau, Surangel Whipps, Jr, wuxuu leeyahay dalkiisu wuxuu sugayaa maalinta adeegyada hawada dib loo soo celin karo, isagoo xusuusanaya dhacdadii medivac ee 1987 markaas oo, Air Nauru, ay ka jawaabtay baaqii ahaa in la maamulo duulimaadka Palau ilaa Manila.
“Maadaama ay yihiin jasiiradaha yaryar iyo dowladaha badweynta, mid ka mid ah waxyaabaha… waxaan fahansanahay waa, iyada oo aan lahayn xiriiryadan dunida dibedda, runtii waan go'doonsan nahay, marar badanna waxaan ku jirnaa naxariista shirkadaha diyaaradaha iyo shirkadaha laga yaabo waxaa laga yaabaa in danahooda aysan la jaanqaadi karin danaheena, ”ayuu yiri Madaxweyne Whipps.
Wuxuu intaas ku daray in aasaaska ASA ay fursad u tahay “inay u wada shaqeeyaan sidii walaalaha Baasifiga” iyo in la arko Nauru Airlines oo ah shirkad guuleysi leh oo kor u qaadeysa adeegyada dadka.
Labada hoggaamiye waxay garwaaqsadeen fursadaha uu mid walba ku bixin karo isku xirka Aasiya, galbeedka, iyo koonfurta.
Dhanka kale, Nauru waxay qaadaysaa tallaabooyin gudaha ah si loo hagaajiyo adeegyada duulimaadyada qaranka iyo isku xirnaanta badda.
Dekedda Nauru ayaa la casriyeeyay si ay u buuxiso heerarka caalamiga ah halka Nauru Airlines oo dhawaan soo iibsatay diyaarad Boeing 737-700 ay qaadan doonto waqtiyo duulimaad dheer, oo ay gaarto meelo kale.
Shaqada diyaarinta ayaa sidoo kale socota si dib loogu soo celiyo dhabaha diyaaradda ee sii xoojin doona badqabka duulimaadka iyo u hoggaansanaanta iyo in Nauru loo kordhiyo dhaqdhaqaaqa gaadiidka hawada mustaqbalka.
Heshiiska ayaa dhigaya in Nauru iyo Palau ay maanka ku hayaan xiriirka dhow ee isku xiraya labada dal, iyo rabitaankooda ku aaddan inay bixiyaan qaab -dhismeedka adeegyada hawada.
Labada dal ayaa sidoo kale aqoonsanaya doorka istiraatiijiyadeed ee gaadiidka cirka ee caalamiga ah ee horumarka waara ee dhaqaalaha jasiiradaha, iyo gaar ahaan kor u qaadista ganacsiga, ganacsiga, iyo dalxiiska.
Labada dal ayaa sidoo kale ku baraarugsan baahida loo qabo in la hagaajiyo heerka, tayada, iyo hufnaanta adeegyada gaadiidka hawada gudaha iyo ka baxsan dalalkooda.
Madaxweyne Aingimea wuxuu mahadcelin kal iyo laab ah u jeediyay Madaxweyne Whipps isagoo ku hadlaya magaca dowladda duulimaadkii naxariista lahaa ee dhowaan qaaday 34 bukaan oo Nauruan ah iyo wefdi u sii raacay Taiwan oo ka yimid Nauru oo leh qorshe farsamo oo qorshaysan oo ku yaal Gobolka Yap ee shidaalka lagu shubay.
Dhibaatada shidaal-siinta waxay la macno tahay shaqaalaha duullimaadka iyo rakaabku inay u baahdaan habeen, Palau, oo si fiican loogu qalabeeyay hoy iyo shuruudaha duulimaadka, ayaa banneeyay diyaaradda iyo rakaabkeedii COVID-tallaalay si ay u degaan oo u hoydaan, ka hor safarkooda hore ee Taiwan.